သောသီခို: ဘိုကလေးကရင်သတ်ပွဲ ဖြစ်ရပ်မှန်
ဘိုကလေးအရေးအခင်းတွင် အသတ်ခံရသော ကရင်အမျိူးသားတို့ ၏ အရေအတွက် အခြေအနေမှန်တွေကို ကေအဲန်ယူအနေနဲ့ အခုအချိန်မှာ ကွင်းဆင်းပြီး မှတ်တမ်းတင်ပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
၀က်စုရဲစခန်းမှအစိုးရရဲတပ်ဖွဲ့ က မင်္သကာသူ ဦးအားမောင်အားသွားရောက်ဖမ်းဆီးရာတွင် ဦးအားမောင်ထွက်ရာ နောက်မှလိုက်လံပစ်ခတ်သော်လည်းလွတ်မြောက်သွားသည်။ သေနပ်(၈)လက်ကျည်ဆံသေတ္တာ ၃လုံးနှင့်ကျည်ဆံတအိတ်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။
ထိုအချိန်တွင် ၀က်စုရဲများက လက်နက်သိမ်းဆီးရမိကြောင်းကို ဗိုလ်မှူး မြင့်အောင်အား လာရောက်သတင်းပို့ သည်။ သို့ ဖြစ်၍ဗိုလ်မှူးမြင့်အောင်နှင့်တချို့အဖွဲ့ ဝင်များရှေ့ ကြိုပြန်သွားကြသည်။ စက်လှေနှင့်ပြန်လိုက်လာသည့်ရဲတပ်ဖွဲ့ ကို KNLA ပျောက်ကျားများဟုထင်ရသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တဖွဲ့ က ကသမျှင်ရွာချောင်းကမ်းပါးမှ ခြုံခိုတိုက်ခိုက်သဖြင့်ရဲ (၁၇)ယောက်သေဆုံးသည်။ စစ်ကူလိုက်လာသည့်စစ်တပ်
အဖွဲ့ ကိုလဲ ကသဘောင်းရွာမှ အမျိုးအမည်မသိတပ်ဖွဲ့ တဖွဲ့ က ဆီးကြိုတိုက်ခိုက်သဖြင့် စစ်သား(၂)ဦးနှင့် ရဲတစ်ဦးကျဆုံးပြန်သည်။ ထိုပျောက်ကျားအဖွဲ့ စက်လှေဖြင့် ရှောင်ပြေးနေစဉ် ထောင်ပိုင်ချောင်းဝတွင် အသင့်စောင့်နေသော အစိုးရတပ်က ဆီးကြိုတိုက်ခိုက်သဖြင့် တချို့ သေဆုံးကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး တချို့ကန်ခမောက်ကြီးအရပ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားကြသည်။ အောက်တိုဘာလ(၅)ရက်နေ့ တွင် အစိုးရကလေယဉ်နဲ့ ကန်ခမောက်တရွာလုံးကိုပစ်ခတ်ပြီး မြေပြင်မှလဲ ၀ိုင်းဝန်းသဖြင့် အမည်မသိပျောက်ကျားအားလုံးအဖမ်းခံကြရသည်။ ဖမ်းမိသမျှကို နေရာတွင်ပင် ရိုက်နှက် ညှင်းပမ်းပြီး သတ်ပစ်လိုက်သည်။ အနီးအနာရှိ ကရင်ရွာအားလုံးကိုလဲဝင်ရောက်ပြီး တွေ့ သမျှလူကြီး၊မိန်းမနှင့် ကလေး မကျန်အားလုံးကို မြန်မာစစ်တပ်က ဖမ်းဆီးနှိတ်စက် သတ်ဖြတ်မှုကြီးစတင်လေတေ့ာသည်။
မပြေးဘဲကျန်သောရွာခံသားများကို ၀ါးချွန်များ တုတ်များကိုင်ဆောင်စေပြီးစစ်သားများနှင့်အတူ ထွက်ပြေးသူများကို လိုက်လံဖမ်းဆီးစေခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဖမ်းမိသောသူအားလုံးနှင့်တကွ လိုက်ဖမ်းပေးသူရွာသားအများစုကို ၀ါးချွန်များဖြင့်ထိုး၍သော်၎င်း ၀ါးရင်းတုတ်များဖြင့်ရိုက်နှက် ၍သော်လည်းကောင်းသတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့သည်။ ပျောက်ကျားများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသည်ဆိုသော ဦးဂျက်ဆင်ဆိုသူကိုလည်း မိသားစုရှေ့ တွင်ပင်လာရောက်ဖမ်းဆီးပြီးရိုက်သတ်ပစ်လိုက်သည်။
ဆိတ်ကြီးရွာသားဦးရှီးလှမှာမူကိုယ့်တွင်းကိုယ်တူးရပြီး ပေါက်တူးနှင့် ပေါက်သတ်ခြင်းခံရသည်။ အောင်ကုန်းရွာခရစ်ယန်သင်းအုပ်ဆရာ လေဟန်ကို သဲသောင်ပြင်ပေါ်တွင် ထိတ်တုံးခတ်ပြီး ရေမတိုက် အစားအစာမကြွေးဘဲ နေပူလှမ်းထားခဲ့ပြီး (၃)ရက်အကြာတွင် မချိမဆန့် သေဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် အဖမ်းခံရချိန်တွင် ဖျားနာနေသည်။ ဒေါင့်ကြီးရွာနေ စောအောင်မြ မှာ ကသမျှင်ရွာတဘက်ကမ်းတွင် ကိုယ့်တွင်းကိုတူးရပြီးနောက် ပေါက်တူးဖြင့်ပေါက်သတ်ခြင်းခံရသည်။ သပြေကုန်းရွာနေ ဦးပန်းမြိုင် က ကရင်ပျောက်ကျားများကိုထမင်းကျွေးခဲ့ဘူးသူအဖြစ် နှိတ်စက်သတ်ဖြတ်ပြီးနောက် သူပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများနှင့်လယ်ထွန်စက်အပြင် အိမ်ကိုပါဖျက်ပြီး စစ်တပ်ကသိမ်းယူသွားခဲ့သည်။ ဘာမှပတ်သက်ခြင်းမရှိသော ကျောင်းဆရာဦးဖိုးလှမှာနှိတ်စက်ပြီး ရေနှစ်သတ်ခြင်းခံရသည်။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ် သို့ ပြန်လည်ခြေချနိုင်ရန် ကေအဲန်အယ်အေတပ်မဟာလေးက အစီအစဉ်ချမှတ်ပြီး ဗဟိုစစ်ဦးစီးချုပ်က စီစစ်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။လုံခြုံမှုရှိသော ခြေကုတ်တခုကို လျှို့ ဝှက်တ်ိတ်ဆိတ်စွာ တည်
ဆောက်ရေးသည် လုပ်ငန်းစဉ်၏ပထမအဆင့်ဖြစ်သည်။ မည်သူမဆို ထိုသို့ ပင်စီစဉ်ကြမည်ဖြစ်သည်။
အောက်တိုဘာလ(၃)ရက်တွင် ကရင်ပျောက်ကျားများက မြန်မာရဲနှင့် စစ်တပ်ကို စတင်တိုက်ခိုက်ခြင်းမှာ
မူရင်းအစီအစဉ်တွင်မပါပေ။ ထိုလှုပ်ရှားမှုမျိုးကို မိမိတို့ ဘက်ကခြေကုတ်မရခင်တွင်လုံးဝ မလုပ်ရကြောင်းကို
ပျောက်ကျားစစ်ဆင်ရေးနားလည်သူတိုင်းသိကြသည်။ မြန်မာစစ်တပ်ကလည်းနားလည်သည်။ စစ်ပညာလေ့ကျင့်သင်ကြားဘူးသူတိုင်းသိကြသည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုမှာ မိမိ သူလျှိုများက ရန်သူ့ လူထဲသို့ ဝင်ပူးပြီး ရန်သူမြင်ရအောင်လုပ်သည့်နည်းထဲတွင်ပါဝင်သည်။
စတိုက်သဖြင့် ပျောက်ကျားများဘက်က မှားသည်ဟု သတင်းကြားရသော အများပြည်သူကို အထင်မှားစေပြီး မသင်္ကသူမှန်သမျှကို ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးခွင့်ရအောင်လုပ်သည့် စစ်ထောက်လှန်းရေးနည်းနာလဲဖြစ်သည်။ တချို့ မှာ ဤအချက်ကိုမတွေးမိသဖြင့် ကရင်ပျောက်ကျားများက စတိုက်ရန်အစီအစဉ်ဖြင့်တိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထင်ရောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်းများရှိနေနိုင်သည်။ မဖြစ်နိုင်သောအချက်ဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်နိုင်ရန် ရှင်းပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Andrew Kham Tai said...
Very sad to read that and I am absolutely believe that is true story. Because we have the same feeling with Karen people. In central Shan state around 1988-2000alot of Shan villager are killed, burned the village, forced to move the village. The most terrible thing is many Shan women are raped by Burmese soldiers.
​ပြောသာ​ပြောတယ်​ KNU ​ခေါင်း​ဆောင်​​တွေ ဂရုစိုက်​ပါ့မလား ဒီမိုက​ရေစီ ဆိုတာဘာလဲလို့ ​မေးချင်​တယ်​ နအဖ န၀တ ဖဆပလ မဆလ သူတို့​ခေါင်း​ဆောင်​​တွေအားလုံး ကျင့်​သုံးတဲ့လမ်းစဉ်​​တွေဟာ ​အောင်​ဆန်းရဲ့လမ်းပြ​မြေပုံ အတိုင်းပါ ဒီ​တော့ ပြည်​ ​သူလူထုသည်​ စစ်​တပ်​ကို​မွေးဖွား​ပေးသည်​ စစ်​တပ်​သည်​ပြည်​ သူလူထုကို ​မွေးဖွား ​ပေးသည်​မဟုတ်​ ဆိုတာကို
ထမင်းစားကြသူတိုင်းသိမှပါ လူ​တွေသတ်​ချင်​သတ်​ပါ ဘာသာ​ရေးကို​​တော့မ​ဆော်​ကားသင့်
ဘူး ဒီ​တော့ ငြိမ်းချမ်း​ရေးပြန်​လုပ်​တဲ့​တော်​လှန်​​ရေးအားလုံး​ခေါင်း​ဆောင်​​တွေ ဘယ်​လိုရှင်း